Terire-ka Airedale - Maxaa Laga Filayaa Noocyadan Ey - Taranka
Airedales waxay ku fiican yihiin cunnooyinka eyga oo tayo sare leh.
Dooxada Aire ee Galbeedka Riding, Yorkshire, waxay ku dhalatay Airedale Terrier. Taariikhda saxda ah lama garanayo laakiin calaamadaha ayaa muujinaya in taranka uu bilaabay inuu soo baxo bartamihii qarnigii sagaal iyo tobnaad. Waxaa loo soo saaray jawaab ahaan celceliska shaqaalaha warshadaha doonaya inay ugaarsadaan otter. Si loo ugaarsado ciyaartan si sax ah ayaa looga baahan yahay xirmo Otterhounds iyo 'Terrier' ama labo.
Airedale waxaa la rumeysan yahay inuu yahay 'Old Ingiriis Madow-iyo-Tan Terrier,' 'Terrier Terrier-ka Burbursan' iyo 'Qallafsan-dahaadh madow-iyo-Tan Terrier' oo ka gudbay Otter Hound iyo kuwo kale. Dhammaan xisaabaadka 'abuurista' ee barta si iskutallaab suurtagal ah ula leh Xudduud Collie ama xoogaa adhi kale ah. Xisaabaadka qaar ayaa sidoo kale tilmaamaya Bull Terrier, halka qaar kalena ay ku adkeysanayaan in ka-weynaantani aysan waligeed dhicin.
Eeyahaas waxaa lagu yiqiin karti xumida ay uleeyihiin in ay la wareegaan cadow kasta oo ay si wanaagsan uga xisaabtamaan naftooda. Waxaa loo jebiyey qoryaha loona tababaray inay wax ka soo qaataan. Waxay ahaayeen tartamayaal kulul oo ku saabsan cayaaraha biyaha-jiirka.
Albert Payson Terhune ayaa si kooban u soo koobay Airedale: “Waxaa ka mid ah godadka miinooyinka ee Aire, kooxaha kala duwan ee macdan qodayaasha ah mid kastaa wuxuu damcay inuu horumariyo eey kaas oo ka hor tagi kara kana dheereyn kara oo OUTTHINK eeyga macdanta kale. Tijaabooyinka waxaa ka soo baxay Airedale casri ah. Isagu waa deg deg badan yahay, cabsi badan yahay, qurux badan yahay, maskax weyn, mid fiican oo ilaaliya. Ma jiraan wax aan la bari karin haddii tababaraha uu haysto hadiyadda ugu yar ee waxbaridda. Inch kasta oo isaga ka mid ah ayaa la isticmaalayaa. Ma jiraan wax soo saar flabby ah. mashiin fiican - mashiin maskax leh, oo lagu daray. ”
Airedale kii ugu horeeyey ee la ogaa inuu yimaado America wuxuu ahaa Bruce oo uu keenay C. H. Mason. Bruce wuxuu ahaa shaygii Bess, oo ahaa biyo xireenka Airedale Jerry, xididka geedka qoyska.
Airedales waxay si guul leh u barteen wax kasta oo ugaadhsiga ugaarsiga weyn ah, ugaarsiga wadaagga ah, iyagoo ah eeyo booliis oo aad u fiican ilaa adeeca shaqada. Maaha in Airedale kasta uu ku fiicnaado aag kasta, laakiin waqti ka dib inbadan ayaa qabtay howlo kala duwan si aad u wanaagsan.
Maanta Airedales wali waxaa loo adeegsadaa eeyo ugaarsi, eeyo waardiye ah, iyo xitaa adeecid iyo eeyo kacsan, laakiin iyagu waa, marka ugu horeysa, aamin, daacad iyo madadaalo.
Airedales waxay ku fiican yihiin cunnooyinka tayada sare leh. Qaarkood waxaa laga yaabaa inay leeyihiin waxoogaa qalalan maqaarka 'cuncunka' waxaana lagu kabi karaa saliidaha qaarkood iyo kelp. Sidoo kale Airedales badan ayaa si fiican uga jawaaba cuntada wan iyo bariis.
Hal shay oo mudan in halkan lagu xuso ayaa ah muddada intee le’eg ee la quudiyo cunnooyinka yaryar. Cilmi baarisyada qaarkood waxay muujinayaan in quudinta cunnida eeyaha muddo dheer ay kordhin karto dhacdooyinka dysplasia ee eeyaha eey u nugul yihiin. Aragtida ayaa ah in boqolkiiba sare ee borotiinka laga helo qaaciidooyinka eeyaha ay dardargelin karaan koritaanka kahor intaan qalfoofka soo koraya uusan taageeri karin culeyska. Bixiyeyaasha qaarkood waxay bilaabaan quudinta cuntada dadka waaweyn goor hore. Dadka badankood waxay si tartiib tartiib ah ugu beddelaan cuntada dadka waaweyn 8-10 bilood. Mar labaad, tani waa wax lagala hadlo breeder iyo dhakhtarkaaga xoolaha.
Xayawaan badan oo xayawaan ah ayaa loo jajabiyaa muuqaalka dabeecadda King of Terriers. Qurxinta wanaagsan waa inuu awoodaa inuu bixiyo adeegan. Haddii kale, la xiriir breed aaggaaga, qaar badan ayaa diyaar u noqon doona inay bixiyaan gargaar qurxin oo xadidan. Airedales waa in lagu cadayaa burushka biinanka maalin kasta si looga saaro timaha dhintay, maadaama aysan 'daadin.' Slimashada alaabtooda (timaha lugaha iyo timaha wejiga) ayaa sidoo kale ka saari doonta timaha dhintay, taasoo u oggolaaneysa timo cusub inay ku soo baxaan.
Airedales waxay “afuufaan” jaakadooda haddii loo oggolaado inay soo baxdo.
Eeyaha la muujinayo waa la duubay oo la jaray. Tan waxaa lagu sharaxay dhowr buug oo ku yaal dhamaadka Su'aalahaan. Waa dadaal waqti badan qaadanaya iyo farshaxan xoogaa adag in la barto.
Airedales waxay doorbidaan inay la joogaan qoysaskooda laakiin sidoo kale waxay jecel yihiin jajab iyo ciyaar. Aag deyr leh ayaa ku fiican jimicsiga iyo ciyaarta, halka ciyaarta ka dib, ay diyaar u yihiin inay sameeyaan eeyo guri oo waaweyn.
Airedales waa kuwa jecel qodista. Xaqiiqdii iyagu waa 'terre-iers.' Had iyo jeer maskaxda ku hay taas markaad diyaarinaysid goob jimicsi.
Tababbarka sanduuqa ayaa fikrad fiican u ah eeyga yar. Markuu sii weynaadaba waxaa laga yaabaa inuu tan u isticmaalo 'godkiisa' wuxuuna leeyahay meel aamin ah oo lagu safro ama maalmahaaga dheer ee shaqada.
Airedales waa eeyo aad u firfircoon una baahan jimicsi badan. Waxay u baahan yihiin aag aad u ballaadhan oo ay ku ciyaaraan oo ku ciyaaraan. Socodka maalinlaha ah waa jimicsi weyn iyo waqti xiiso leh adiga iyo Airedale-ba labadiinaba.
Airedales waxay u muuqan kartaa 'eey gardarro badan,' taas oo ka dhigaysa is dhexgalka bulshada iyo tababbar addeecidda mid waajib ah.
Sida noocyada kale, bilow inaad la dhaqanto Airedale da 'yar. Bulsheynta ayaa bilaabi doonta inay aasaas u dhigto wehel farxad leh oo adeecsan iyadoo kordhinaysa kalsoonida eyga. Airedales waxay u muuqan kartaa 'eey gardarro badan,' taas oo ka dhigaysa is dhexgalka bulshada iyo tababbar addeecidda mid waajib ah. Eygaagu waa inuu ku ixtiraamaa laakiin waa inaad kasbataa xushmaddaas. Eygaaga yar wuxuu u baahan yahay sharciyo isdaba joog ah oo uu ku noolaado. Tusaale ahaan, ma loo oggolaan doonaa sariirta mise maya? Xeerarka iswaafaqsan waxay soo saari doonaan wehel la isku halleyn karo. Fasallada eeyaha, haddii la heli karo, waa fikrad wanaagsan.
Airedales si fiican ugama jawaabaan hababka adag ee tababarka. Waxay rabaan inay kaa farxiyaan, laakiin waa inay fahmaan waxa laga filayo iyaga.
Tilmaamo dhowr ah oo ku saabsan tababarka guuleysta waa:
Ha caajisin eeygaaga. Airedales ma noqon doonto “aalado”. Wuxuu aadi doonaa indha indheeyaha xiisaha leh ka hor inta uusan ku celcelin isla qaabkii cirro 'doqonnimo' ah marar badan.
Xusuusnow in Airedales ay yihiin 'mufakiriin.' Ha weydiinin inay sameeyaan waxyaabo nacas ah. Waqtiga kaliya ee gabadheyda gabarta ah waligood jabiso waxay ahayd maxaa yeelay 'qofka garsoorka ah' wuxuu ahaa doqon ku filan inuu eeyaha dhigo qorraxda si garsooruhu ugu istaago hooska galabnimadii Julaay.
Isticmaal dhiirigelin wanaagsan. Dhib malahan sida nacasnimada ah ee aad dareento, waa inuu dareemaa sidii inuu kaa farxinayo. Noqo qof hal abuur leh. Xusuusnow, Airedales waa mufakiriin, ma ahan aalado.
Kusoo dhowaw kulan kasta oo “tababar ah” oo ah fursad aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan wehelkaaga. Isku day inaad ka eegto amar kasta eeygaaga aragtidiisa. Qaabkan fekerka ayaa kordhin doona ixtiraamka wadajirka ah ee horumarin kara inta tababarku socdo.
Kordhi fursadahaaga guusha adoo lashaqeynaya dadka qadarinta iyo fahmidda cabsida. Ha u oggolaan macallin kasta oo addeecid ah ama qof kale inuu isbarbardhigo Airedale-kaaga kuwa ku habboon “Goobaha” Xuduudaha, Xuduudaha iyo GSD-yada. Waxaan maqlay sheeko haweeney ka shaqeysa Airedale oo ku jirta fasalka adeecida oo uu baray tababaraha Xuduudaha Collie. Intii lagu guda jiray hal fasal, waxay ka shaqeynayeen qaababka ciribta. Macalinka ayaa mashquul ku ahaa tilmaamida Airedale awood la'aanta inuu raaco qaabka madaama macalinka iyo Xudduudka Collie ay hoos udhaceen boodbood halka Airedale ay ka daawanayeen fadhiga ugu fiican kaliya boodka hortiisa. Terrier-ka 'doqonka ah' wuu 'dhoolla caddeeyay.'
Waa inaad si dabacsan u noqotid tababarka Airedale. Filo waxa aan la filayn oo ogow wehelkaaga. Ha isku dayin inaad ku dhejiso biil laba jibbaaran meel dalool wareegsan Waa fikrad khaldan oo caadi ah in Airedales aan la tababari karin. Airedales waxay si fudud ugu baahan yihiin tababarayaal caqli badan oo bukaanka ah.
Raadi breed sumcad leh marka aad dooraneyso eeyahaaga Airedale. Haddii ay suurogal tahay, booqo guriga eyda aad ka dhici karto. Xusuusnow in 8-da toddobaad ee ugu horreeya eey eeyyihiisu ay aad muhiim u yihiin. Saaxiib weyn / eey show ah wuxuu bilaabmaa dhalashada.
Samee liistada su'aalaha kahor intaadan lahadlin ama booqan abuurka. U fiirso eyda eyda. Sidee eeydu uga falceliyaan soosaarayaasha? Sidee ayey kaaga falceliyaan? Aaggooda ma nadiif yahay? Weydii breed-ka haddii waalidiinta laga hubiyey dysplasia? Ma jirtaa taariikh qoys oo xasaasiyadeed? Eydu ma waxay ag joogeen carruurta? Miyay ag joogeen bisado? Bixiyuhu ma la heli doonaa si uu uga jawaabo su'aalaha mustaqbalka? Miyuu breedku bixiyaa qandaraas?
Suurtagal maaha suurtagal in kala-baxe dammaanad ka qaado caafimaadka xayawaan kasta, laakiin abuureyaashu waa inay diyaar u yihiin inay neefka dib u celiyaan oo ay beddelaan! Kalkaaliyeyaasha mas'uulka ka ah waxay badanaa u baahan doonaan in xayawaanka loo soo celiyo iyaga, haddii sabab kasta ha noqotee, aadan awoodin inaad haysato xayawaanka. Tani waxay u xaqiijineysaa iyaga in xayawaanka la daryeeli doono mustaqbalka. Waa maxay tallaalada la bixiyay? Eydu ma la dirqiyey? (meelaha kala duwan waxay u baahan yihiin heerar kala duwan oo ah dirxi, cimilada awgeed.) Kuwaani waa tusaale qaar ka mid ah su'aalaha ay tahay inaad weydiiso.
Haddii ay suurtagal tahay, u fiirso dhowr qashin oo la hadal dhowr breed.
Xusuusnow inaad xulanayso wehel sannado badan oo soo socda, markaa waqti qaado, hubi inaad xulashadaadu ahayn oo keliya nooc la jaanqaadi kara, laakiin sidoo kale xayawaan iyo taranka isku habboon !! Ka filo su'aalo badan shaqaalahaaga. Isaga / iyadu waxay sidoo kale xulanaysaa wehel xayawaan kaas oo saacado badan oo jacayl, fikir iyo tamar ah la galiyay.
Markaad soo qaadatid eeyahaaga, soosaarahaaga ayaa kuu sheegi kara jadwalka eeyaha, nooca cuntada oo kugula talin kara cunto mustaqbalka ah. Markaa si tartiib tartiib ah ayaad u beddeli kartaa cuntada si aad ugu habboonaato dookhaaga Xusuusnow in isbeddelada lama filaanka ah ee cuntada ay si weyn u carqaladeyn karaan nidaamka dheef-shiidka eeyaha oo ay u sababi karto calool xanuun. Airedale waxoogaa ayuu cuni karaa, gaar ahaan yar yar oo si dhakhso ah u koraya.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan barashada la noolaanshaha eeyahaaga cusub, eeg RPD FAQ oo cinwaankeedu yahay 'Eeyahaaga Cusub' ee uu qoray Cindy Moore.
Xusuusnow xaalado badan, eey kaa weyn ayaa ku habboon xaaladdaada gaarka ah si aad uga wanaagsan eey yar yar. Bixiyeyaal badan ayaa dhiga eey yaryar iyo eeyo. Eeyahaani badiyaa waa 'muuji rajo' oo aan u bislaan sidii la filayay ama laga yaabo in dib loogu celiyo soosaaraha sababo kala duwan awgood. (Khibradeyda shaqsiyadeed ee ah korsashada eey aad u weyn ayaa guuleysatay.) Urur kasta oo samatabbixin ah wuxuu raadinayaa guryo wanaagsan oo korsasho. Eeyaha samatabbixintu badanaa waxay u baahan yihiin shaqo dheeri ah laakiin sidoo kale waxay noqon karaan kuwo waxtar leh.
Haddii aad tixgelinayso eey ka weyn ama eey, fadlan akhri RPD FAQ oo cinwaankeedu yahay 'Eygaaga Cusub' oo ay sidoo kale qortay Cindy Moore, si aad u hesho macluumaad dheeraad ah.
Xusuusnow in Airedales iyo terriers-yada kale ay yihiin eeyo caqli badan oo shaqsiyadeed. Iyagu maahan eeyo loo baahan yahay in looga tago qorshahooda. Waad la yaabi kartaa caqligooda. Airedale tababaran ayaa noqon kara saaxiibka ugu fiican ee waligaa aad yeelan doonto. Hayso dareenkaaga kaftanka ah iyo xeerar isdaba joog ah oo eygaaga ah, adigana waxaa lagugu abaalmarin doonaa wehel adiga oo aan isbarbar dhigin. Waa inaad noqotaa qof caqli badan, dulqaad badan oo sheegasho leh sida saaxiibkaa aad dooraneyso.
Caafimaadka Guud iyo Dhibaatooyinka Caafimaadka Gaarka ah
Airedales, guud ahaan, waa xayawaan aad u caafimaad qaba oo adag. Qaarkood waxay leeyihiin dhibaatooyin caafimaad, laakiin xaalado badan, kuwani waa kuwo yar.
Airedales, sida dhammaan noocyada kale ee waaweyn, waxay leeyihiin dhacdooyin dysplasia sinta ah. Dacwadahaani maahan kuwo caam ah laakiin suurtagalnimada in wax laga qabto. Markaad xulaneyso eey, markasta wax ka weydii breeder-ka xaaladda miskaha waalidiinta. Bixiyeyaal badan ayaa leh raajo sinta ah oo hordhac ah oo la sameeyo markay jiraan da'da (raajooyinkan looma diri karo lambarka OFA), kahor intaanay bilaabin xirfad 'show'.
Airedales, sida terrier badan, waxay yeelan karaan maqaar 'cuncun'. Tani waxay calaamad u noqon kartaa waxyaabo badan. Mararka qaarkood maahan wax ka badan dhibaatada cuntada, mararka qaarkoodna waa calaamadda hyperthyroidism ama hypothyroidism. Dhammaan waxyaabaha kor ku xusan si caadi ah ayaa loo daaweyn karaa loona maamuli karaa si fudud. Maqaarka 'cuncun' ayaa sidoo kale noqon kara calaamadaha xasaasiyadda. Xasaasiyaddan waxay noqon karaan cunto ama waxyaabo kale. Khibradeyda waxay ahayd in meesha ugu horeysa ee laga bilaabo ay tahay cuntada. Qaar ka mid ah Airedales waxay ku fiicnaadaan wan tayo leh iyo cuntada bariiska, kuwa kale kuma fiicna.
Had iyo jeer waqti u qaado si aad dhagahaaga Airedale u ahaato mid nadiif ah oo qallalan (tani waxay kaa caawinaysaa ka hortagga infekshinka ama cuncunka.), Ciddiyaha oo la jaro, ilkaha la nadiifiyo (tan oo si joogto ah guriga loogu sameeyo waxay ka hortagi kartaa cudurka ciridka iyo dhibaatooyinka kale ee ilkaha, waana wax fiican Ku celceli tababarka safarka dhakhtarka xoolaha.), Xusuusnowna inaad timaha ka dhigto inta u dhexeysa suufka.
Had iyo jeer kala tasho dhakhtarkaaga xoolaha iyo dhaqtarkaaga wixii walaac caafimaad ah.
Xagee ka heli karaa breed Airedale aaggayga?
Naadiga Airedale Terrier Club of America wuxuu hayaa liis xubin ah. Ama, ka hubi Ururka Samatabbixinta Airedale
Sideen ku doortaa mid-yaqaan? Maxaan ka filan karaa dhaqankayga?
Doorashada breeder ayaa si isku mid ah muhiim u ah xulashada nooc ama ey. Waa inaad la xiriirtaa ilaha sida kuwa kor ku xusan, tag goobaha eyga, ama la hadal xayawaannada aagga ku yaal. La hadal inta badan ee soosaarayaasha ah ee suurtogalka ah. Waa inaad doorataa abuure u diyaar ah inuu kula shaqeeyo oo kaa caawiyo inaad doorato xayawaanka kugu habboon. Kalkaaliyahaagu waa inuu ku weydiiyaa su'aalo adiga. Isaga / iyadu waa inay aad uga walwasho daryeelka eey ee la geeyo daryeelkaaga. Haddii aad booqan karto breed, waa inaad. Waa inaad ilaalisaa isdhexgalka ka dhexeeya taranka iyo xayawaankiisa. Xayawaanku ma waxay umuuqdaan kuwa faraxsan, oo si wanaagsan loo daryeelay, oo nadiif ah?
Bixiye wanaagsan ayaa kuusoo bandhigi doona diiwaanada caafimaadka, isirka iyo, xaaladaha badankood, qandaraas. Badankood qandaraasyadan ayaa uguyaraan qeexaya in:
neefka caafimaadkiisu wuu wanaagsan yahay
xayawaanka waa in lala socodsiiyaa waqtiga ugu dambeeya ee tallaalada (iyo waxyaabaha kale ee caafimaadka khuseeya ee la daryeelo, sida wadne xanuunka, dulinka mindhicirka, xakameynta boodada, iwm.)
dhammaan sharciyada ujrada maxalliga ah waa in loo hoggaansamo
xayawaanka waxaa loo celin doonaa soo-saaraha, haddii sabab kasta ha noqotee, aadan awoodin inaad haysatid eyga
xayawaanka waa la badalayaa marka laga hadlayo arimaha caafimaadka la dhaxlo ee dhaawacaya xayawaanka
xayawaanka waa la xareynayaa ama waa la nadiifin doonaa (haddii uusan jirin heshiis gaar ah, tusaale ahaan rajada muujinta)
Qaar badan oo ka mid ah kuwa wax iibiya ayaa ku iibin doona eeyo yaryar oo keliya diiwaangelin xaddidan oo ka socota AKC, haddii uusan jirin heshiis gaar ah. Kalkaaliyahaagu waa inuu isu diyaariyaa inuu ka jawaabo su'aalaha iskuna dayo inuu ka caawiyo xallinta dhibaatooyinka (haddii ay soo baxaan) mustaqbalka. Sida lagu xusay 1998 ATCA Roster iyo Information Booklet, kuwa sida wanaagsan wax u yaqaan waxay aqbalaan mas'uuliyadda eyda ay soo saaraan dib ayeyna ula soo noqdaan haddii ay caawimaad u baahdaan, dib-u-qiimeynta iyo ku meeleynta guryo cusub oo ku habboon. Kalkaaliyeyaasha mas'uulka ka ah waxay ku fashilmaan inay ku noolaadaan filashooyinkaas.
Diiwaangelin Xaddidan, oo leh AKC, waxay ka dhigan tahay in eey diiwaangashan tahay laakiin aysan jirin qashin ay soo saartay eeygaas oo u qalma diiwaangelin. Diiwaangelin xaddidan ayaa macnaheedu yahay in eeyga aan lagu soo dari karin tartanka noocyada dhacdooyinka shatiga AKC, laakiin waxaa laga yaabaa inuu ku tartamo dhacdooyinka kale ee shatiga leh sida Tijaabooyinka Daaweynta iyo Imtixaannada Dhageysiga.
Airedales ma ku fiican yihiin carruurta?
Sida ay tahay eeyaha oo dhami, carruurta iyo eeyga labadaba waa in la baro inay is ixtiraamaan. Carruurta waa in la baraa in qaadashada alaabta carruurtu ku ciyaarto ama eyga oo dhibaya inta ay / iyadu wax cunayaan aysan ahayn dhaqanno wanaagsan. Sidoo kale, eeyga waa in la baro in ku boodida dadka ama 'afka' aysan ahayn sifooyin la aqbali karo. Guri kastaa wuxuu yeelan doonaa sharciyo kala duwan (oo ay tahay in si taxaddar leh looga fiirsado ka hor inta aan la helin eey kasta) kaas oo ay tahay in si cad oo joogto ah loogu gudbiyo qof walba (dadka waaweyn, carruurta, iyo eeyga). Tababarka saxda ah iyo dulqaadka, Airedales waxay layaabaan caruurta waaweyn. Aniga, shaqsiyan, kama tagi doono ilmo yar iyo eey kasta oo aan la joogin.
Aad ayaa lagugula talinayaa inaad raadsato talo khabiir ku takhasusay tababarka markaad baraneyso eygaaga carruurta. Aad ayey muhiim ugu tahay eeyga inuu ilaaliyo booska “eey” dhexdiisa iyadoo aan laga gaabinayn muhiimadda iyo baahida eyga.
Yeyda deyrka ah miyaa loo “baahan yahay” lahaanshaha Airedale?
In kasta oo daarad deyr leh aysan shardi u ahayn lahaanshaha Airedale, haddana waa ku dar aad u weyn! Kahor intaadan eeyga u soo gelin reerkaaga, waa inaad tixgelisaa waxa aad sameyn doonto maalmaha aad jiran tahay, daahdo, ama sababo kale awgood oo aadan u socon karin eeyga. Meelo badan waxay leeyihiin nooc ka mid ah sharciga xadhigga, iyo caafimaadka eeyga, waa inaadan waligaa u oggolaan eeyga inuu si xor ah u ordo, iyada oo aan lahayn nooc ka mid ah soohdinta. Xusuusnow in Airedales loo soo saaray ugaarsiga iyo argagaxisada, guud ahaan, waxay ceyrsan doonaan “xayawaannada dhogorta leh” iyagoo si taxaddar la’aan ah uga tanaasulaya baashaal.
Ma runbaa in Airedales ay u fiican yihiin dadka xasaasiyadda ku leh?
In kasta oo ay run tahay in dad badan oo xasaasiyad ku leh noocyada kale ay u muuqdaan inay dhibaatooyinkoodu aad ugu yar yihiin la noolaanshaha Airedales, xaqiiqda ah inaad xasaasiyad qabtaa maahan sabab ku filan oo lagu helo Airedale. Waxaad xubin ku darsaneysaa reerkaaga waana inaad tixgelisaa dabeecadda, cabirka, jadwalkaaga iyo waxyaabo kale oo badan markaad xulaneyso xayawaanka rabaayadda ah. Waxaa jira noocyo kale, (tusaale ahaan, Poodles) kuwaas oo waliba 'xasaasiyad yar', oo adiga iyo taadaba aad ugu habboonaan kara.
Airedales-da waayeelka ah ma la jaan qaadi karaan jawi cusub? Goorma ayuu samatabbixin ama eey ka weyn ii yahay xulasho wanaagsan?
Airedales ayaa aad loola qabsan karaa jawi cusub. Sida xayawaanka badankood, waxay sifiican ugaga jawaabaan xaaladaha kalgacalka iyo habaysan. Eeyaha duqoobay ayaa mararka qaarkood aad looga jecelyahay xaalad gaar ah eey-yar. Mid ka mid ah tusaale waa qoys ama qof aan si fudud u rabin inuu wax ka qabto burburka guriga eey. Waxaa laga yaabaa inaad waxyar ka weyntahay oo aad rabto wehelnimada eeyga laakiin aadan u baahnayn tamarta eeyga. Kawaran hadaad tahay orod oo aad wehel rabto? (La talin maayo eey yar inuu ordo!) Waxaa jira xaalado fara badan oo xayawaan duug ah uu sifiican ugufiicnaan karo gurigaaga.
Xayawaanada duugga ah waxaa ka mid noqon kara badbaado (sabab kasta ha ku timaadee) ama xayawaanka duugga ah ee abuure ay jeclaan karto in lagu meeleeyo guri wanaagsan. Had iyo jeer u hel asalka ugu badan xayawaanka sida ugu macquulsan. Macluumaadka caafimaadka waa in la bixiyaa. Haddii aad u maleyneyso in xayawaanka duugga ahi ay adiga kuu fiican yihiin, markaa waa inaad sidoo kale tixgelisaa 'dib-u-tababaridda' ee loo baahan karo. Waxay kuxirantahay xaalada uu xayawaanku ka yimaado tani way ku kala duwanaan kartaa burburka guriga ilaa barida xayawaanka in kasta oo ay caadi tahay in lagu seexdo sariirta guriga hore, xeerarka halkan ayaa ah, sariirta eyga ee dabka hortiisa. Mid ka mid ah soosaarayaasha ayaa soo jeediyay in hab wanaagsan marka lala macaamilayo xayawaanka waayeelka ah ay tahay in loola macaamilo sida eey oo kale, loo qaato inuusan isagu / iyadu waxba aqoon oo ay isaga / iyada u kasbadaan xoriyadooda.
Miyaan “ku tababaraa” tareenkayga Airedale?
Fikradayda, tababarka sariidhadu waa mid lagu daro. Waa inaan loo isticmaalin bedel ahaan in Airedale lagu tababaro inuu yeesho asluub ​​isla markaana uu ku dhex noolaado qawaaniinta u degsan reerka laakiin waa inuu ahaadaa mid “raashin” ammaan ah, raaxo leh oo xayawaankaaga ay ku nastaan. safarka. Barida eygaaga in sanduuqiisa / keeda uu yahay meeshiisa / booskeeda waxay noqon kartaa mid aad u qiimo badan markay shirkaddu timaaddo, markuu gurigu jajaban yahay, iyo haddii xayawaankaagu mar uun u xirnaado sababo caafimaad awgood. Waxaan soo maray ey oo u galay qalliin weyn oo ay ahayd in goor hore gurigeyga la ii diro, maxaa yeelay 'wey ka baxdey' markii la xirayey. Waxaan go aansaday markaa inaanan yeelan doonin xayawaan kale oo aan cariish loo tababbarin.
8 Sababood oo Eygaagu u Liicaayo & Calalinta Labadiisa Bilood
dib u soo celinta dahabka iyo shaybaadhka jaalaha ah
Magacyada pitbull buluuga ah ee ragga
Beagle ugu yar aduunka
caucasian ovcharka orso Ruush